Network Associate Plus (NA+) - BIM Trainings
BIM ၏ Network Professional Plus (NA+) Program ဟာ Network Professional တစ်ယောက်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုသည့်သူတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Routing & Switching Technologies များ IP Addressing Scheme များ ၊ Routing Protocol များ နှင့် WAN Technology များကို Intensive Training နှင့်Hands-On Lab များအသုံးပြု၍ ထိထိမိမိ အချိုးကျ စွာ ပေါင်းစပ်ကာ သင်ကြားပေးမည့် Training Program တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Cisco Press မှကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ Study Material များကိုအသုံးပြုထားပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Small to Medium Size Enterprise Branch Network တွေကို Install ၊ Configure နှင့် Troubleshoot လုပ်နိုင်သည်အထိ နားလည်တတ်မြောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ CCIE များကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့Network လောကကျွန်ကြုံတွေ့ရမယ့် Scenarios များကို CCIE ဆရာများရဲ့ အတွေ့ကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊ latest Cisco equipment များ၊ simulator များစတဲ့ ထောက်အကူပစ္စည်းစုံလင်စွာဖြင့် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်သူအားလုံးသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း Network Professional တစ်ယောက်အနေဖြင့် သိထားသင့်သော Advanced Technologies များကို သင်ကြားပေးမည့် Associate Booster Class (၂) ခုကိုပါ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါတွေအားလုံးအပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်လိုအပ်သည့် Project Documentation ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Networking Job Role များ၏ သဘောသဘာဝများ စသည်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Network Associate Plus Program သည် Network Industry တွင် Professional တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်ရန် ကြိုးစားနေသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။
NA+ မှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
စာတွေ့ လက်တွေ့ သာမက လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံများစွာရှိသော Mentor များမှ သင်ကြားပို့ ချပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် Networking Technology များကို တိကျရှင်းလင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခြင်း။
CCNA စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်း
Network Professional တစ်ရောက်အနေဖြစ် လွယ်ကူစွာ စတင်လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခြင်း (Job Role: Network Specialist, Network Administrator, Network Support Engineer)
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများ ပိုမိုရရှိလာခြင်း ၊ လစာများမြင့်တက်လာနိုင်သော အခွင့်ရေးများရလာနိုင်ခြင်း။
အမှန်တကယ် တတ်သိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ Customer များထံမှ ယုံကြည်မှုရရှိလာနိုင်ခြင်း။
ဤအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
အခြားမေးခွန်း များရှိပါက ဤနေရာတွင် သို့မဟုတ် Facebook Page တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မည်သူများ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သင့်သလဲ?
အခြေခံကနေစပြီး စနစ်တကျ သင်ြကားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတွေ့ကြုံမရှိပေမယ့် Network ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မည်သူမဆို တက်နိုင်ပါတယ်။ Pre-sales, Post-sales Enigneer များ၊ Entry-level network engineer များ၊ Network administrators များ၊ network support technicians များ၊ help desk technicians များ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
Network Professional တစ်ရောက်အနေဖြစ် IT နယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ
IT နယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း Network နှင့် မရင်းနှီးသေး ၍ Networking Technology များကို အခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများ
ယခုလက်ရှိ Desktop and IT Support, System Engineer/Administrator အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ
Network ကိုစိတ်ဝင်စားသော Server/System Engineer များ
Networking Technologies ကိုပိုင်နိုင် ကျွမ်းကျင်သော Network Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်လိုသူများ
မိမိရဲ့ Career Development အတွက် ဆက်လက်လေ့လာသင်ကြားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူများ
ဒီ Program ဟာ Booster Class တွေအပါအဝင် စုစုပေါင်း နာရီ (၄၀ ) ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤ Program ကိုတတ်ရောက်လိုက်ရုံ နှင့် Network Engineer တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်ပါသလား?
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Small to Medium Size Enterprise Branch Network တွေကို Install ၊ Configure နှင့် Troubleshoot လုပ်နိုင်သည်အထိ နားလည်တတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်သည့် Project Documentation ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Networking Job Role များ၏ သဘောသဘာဝများ စသည်တို့ကိုလည်း သိရှိနေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤအစီအစဉ်ကို တတ်ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်သလဲ?
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် သို့မဟုတ် Facebook Page တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဒီ Program မှာ ဘယ် Networking Technology တွေ အကြောင်း လေ့လာသင်ယူခွင့်ရမှာလည်း?
Network Associate Plus Program တွင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေအပြင် Associate Booster Class ( ၂ ) ခုကိုပါ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Program အပြီးမှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Variable Length Subnet Masks (VLSMs), Summarization, and Troubleshooting TCP/IP
Real-World Project Simulation
Project Delivery Skills (Implementation Plan, Project Documentation and UAT)
Choose any2Associate Booster Classes.
Lab 1: Switch Startup and Initial Configuration
Lab 2: Troubleshoot Switch Media Issues
Lab 3: Router Setup and Initial Configuration
Lab 4: ConfigureaStatic Route, DHCP, and Network Address Translation
Lab 5: Enhance the Security of Router and Switch Configuration
Lab 6: Device Hardening
Lab 7: Filter Traffic with ACLs
Lab 8: Enhanced – Troubleshoot ACLs
Lab 9: Configure Basic IPv6
Lab 10: Implement IPv6 Stateless Autoconfiguration
Lab 11: Implement IPv6 Routing
Lab 12: Configure an Expanded Switched Network
Lab 13: Configure DHCP Server
Lab 14: Troubleshoot VLANs and Trunks
Mid-Course Challenge Lab***
Lab 15: Optimize STP
Lab 16: Configure EtherChannel
Lab 17: Troubleshoot IP Connectivity
Lab 18: Configure and TroubleshootaSerial Connection
Lab 19: EstablishaFrame Relay WAN
Lab 20: EstablishaGRE Tunnel
Lab 21: Implement EIGRP
Lab 22: Troubleshoot EIGRP
Lab 23: Implement EIGRP for IPv6
Lab 24: Implement Single-Area OSPF
Lab 25: Configure Multiarea OSPF
Lab 26: Troubleshoot Multiarea OSPF
Lab 27: Configure Multiarea OSPFv3
Lab 28: Configure Basic SNMP and Syslog
Lab 29: Manage Cisco Devices and Licensing
Final Challenge Lab***
အခြားသိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာများရှိပါက ဤနေရာတွင် သို့မဟုတ် Facebook Page တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။